CinderCoin စျေး - အွန်လိုင်း CIN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CinderCoin (CIN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CinderCoin (CIN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CinderCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CinderCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CinderCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CinderCoinCIN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0982CinderCoinCIN သို့ ယူရိုEUR€0.0834CinderCoinCIN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0753CinderCoinCIN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0897CinderCoinCIN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.89CinderCoinCIN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.621CinderCoinCIN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.19CinderCoinCIN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.368CinderCoinCIN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.132CinderCoinCIN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.137CinderCoinCIN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.2CinderCoinCIN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.761CinderCoinCIN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.532CinderCoinCIN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.37CinderCoinCIN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.49CinderCoinCIN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.135CinderCoinCIN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.149CinderCoinCIN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.07CinderCoinCIN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.684CinderCoinCIN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.41CinderCoinCIN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩116.88CinderCoinCIN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦37.23CinderCoinCIN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.25CinderCoinCIN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.72
CinderCoinCIN သို့ BitcoinBTC0.000009 CinderCoinCIN သို့ EthereumETH0.000267 CinderCoinCIN သို့ LitecoinLTC0.00175 CinderCoinCIN သို့ DigitalCashDASH0.00105 CinderCoinCIN သို့ MoneroXMR0.00108 CinderCoinCIN သို့ NxtNXT7.14 CinderCoinCIN သို့ Ethereum ClassicETC0.0145 CinderCoinCIN သို့ DogecoinDOGE28.8 CinderCoinCIN သို့ ZCashZEC0.00113 CinderCoinCIN သို့ BitsharesBTS3.89 CinderCoinCIN သို့ DigiByteDGB3.71 CinderCoinCIN သို့ RippleXRP0.346 CinderCoinCIN သို့ BitcoinDarkBTCD0.00344 CinderCoinCIN သို့ PeerCoinPPC0.344 CinderCoinCIN သို့ CraigsCoinCRAIG45.45 CinderCoinCIN သို့ BitstakeXBS4.26 CinderCoinCIN သို့ PayCoinXPY1.74 CinderCoinCIN သို့ ProsperCoinPRC12.52 CinderCoinCIN သို့ YbCoinYBC0.00005 CinderCoinCIN သို့ DarkKushDANK31.98 CinderCoinCIN သို့ GiveCoinGIVE215.87 CinderCoinCIN သို့ KoboCoinKOBO23.5 CinderCoinCIN သို့ DarkTokenDT0.0905 CinderCoinCIN သို့ CETUS CoinCETI287.84